kidergeburtstag - Der Schönste Tag Ihm Jahr Für Ihr kid!
Fetin'ny ankizy sy lalao ary asa-tanana
Hevitra ho an'ny antoko lohahevitra
Hevitra lalao kilasika ho an'ny tsingerintaona nahaterahan'ny ankizy
Alamino ny tsingerintaona nahaterahan'ny ankizy arakaraka ny vanim-potoana
Hetsika mahafinaritra bebe kokoa miaraka amin'ny ankizy
Isaina ny andro, toa tsy misy farany ny ora, miakatra ny fientanam-po ary lasa fitsapana ny faharetana ny fiandrasana. Ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy no andro tsara indrindra amin'ny taona. Tsy toy ny Krismasy na fialantsasatra hafa, momba azy ireo daholo izany. Ary mankalaza koa isika amin'ity andro manokana ity fa misy ny zanatsika. Ny tanjonay amin'ny maha-ray aman-dreny dia ny hitoetra ao anaty fitadidiana tsara io fotoana manokana io.
Tsingerintaona nahaterahan'ny ankizy - ny andro tsara indrindra amin'ny taona ho an'ny zanakao!
Maniry maso mangirana, fihomehezana ary fahagagana mahafinaritra izahay. Tianay ny hiaina zavatra tsy hay hadinoina amin'ny zanatsika izay azontsika jerena ela. Izahay ray aman-dreny dia maniry fitsingerenan'ny andro nahaterahana izay tian'ny zanakay sy tiany.
Hevitra lalao miaraka amin'ny ankizy - © Dan Race / Adobe Stock
Misy fomba maromaro ahafahana mankalaza ny andro tsara indrindra amin'ny taona.
Rehefa manomana fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy dia mifantoha amin'ny tombontsoan'ny zaza
Ny safidin'ny zanatsika dia tokony hanana andraikitra lehibe amin'ny fandaminana. Rehefa dinihina tokoa, amin'ity andro miavaka ity dia izy no mpilalao fototra.
Ny fomba tsara hanaovana an'io dia antsoina hoe antoko lohahevitra. Na ny ray aman-dreny na ny zaza misafidy lohahevitra iray izay handaminana ny fankalazana. Ity lohahevitra ity dia mihazakazaka toy ny kofehy mena mandritra ny festival: servieta, lambam-pandriana, pennants, balaonina, mugs, takelaka, fanasana, haingon-trano mofomamy, lalao - mifanaraka amin'ny teny filamatra ny zava-drehetra.
Ohatra, raha te hanao fety andriambavy ny zanakavavy dia azonao atao ny mieritreritra ny hitafy ny sahaza ny ankizy amin'ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy ary mitazona «ball court». Raha mpankafy dinôzôro lehibe ilay zanaka lahy, dia azo antoka fa ho faly tsy manam-petra amin'ny sary dinôzôro amin'ny kapoaka fisotroana, fanomezana izay mahery amin'ny dinôzôro ho an'ny vahininy na pinhata toa an'i Tyrannosaurus Rex.
Alao an-tsaina fotsiny ny fihetsiky ny zanakao rehefa mahita ny efitrano voaravaka sy ny latabatra kafe izy ireo ary mahita ireo mpilalao tiany indrindra. Raha fantatry ny zanakao tsara hoe: "Natao ho ahy irery izany rehetra izany. Ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana dia matetika lava ao an-tsain'ny zaza noho ny tena fanomezana. Ary isika ray aman-dreny dia afaka manamboatra ity andro ity manokana amin'ny fiheverana kely amin'ny antsipiriany.
Ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy dia saika ny andro tsara indrindra amin'ny taona ho an'ny ankizy kely. Tsy mahagaga raha tanjon'ny ray aman-dreny lehibe indrindra ny hanao ity andro ity ho tsara tarehy sy miavaka indrindra araka izay azo atao. Ny fahasambaran'ny zaza fitsingerenan'ny andro nahaterahana mijoro na mianjera miaraka amin'ny fety ankizy mahomby. Ny tsindry eo amin'ny rohy iray dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny fety lohahevitra voafantina:
Fetin'ny lohahevitra anaty tontolo anaty rano
Andriambavy antoko antoko
Ireto ambany ireto ny torolàlana momba ny hevitra kilalao kilasika malaza amin'ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy. Ny tsindry eo amin'ny sary dia manokatra ny pejy irina:
Mamely ny vilany
Mandehana bowling miaraka amin'ny ankizy
Dia nankany Jerosalema
Mampitony ny saina ny fandokoana
Azonao atao ny manao ny lanonana fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy raha toa ka mizatra kely amin'ny vanim-potoana. Fantatsika rehetra fa ny ady amin'ny baomba rano dia azo atao amin'ny maripana mihoatra ny 25 degre Celsius.
Fa ahoana no hivoahan'ny lalao sy vatomamy amin'ny fotoanan'ny Krismasy? Mandarinina sy voanjo fa tsy sôkôla sy mofomamy? Tsia, tsy tokony hihazona izany henjana izany ianao amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zaza. Na eo aza izany, ny paoma voaendy sy ny mofo-mofo dia atao fiovana matsiro. Ary ny tolotra asa tanana Krismasy atmosfera dia hevitra tsara hampitony ny ankizy faly indray.
Ahoana ny aloky ny labozia vita amin'ny foil vita amin'ny asa tanana matanjaka? Sa fehiloha ravina amin'ny fararano? Amin'ny lohataona dia afaka mandoko vilany voninkazo miaraka amin'ireo ankizy ianao ary mamafy voan-voninkazo ao anatiny - ny fanomezana fampiantranoana dia vonona ho an'ny ankizy vahiny rehetra. Azonao atao ny mahita hevitra sy fisafidianana ho an'ny fety fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsirairay mora sy mazava avy amin'ny mpanome tolotra malaza amin'ny Internet.
Hevitra lalao lohataona
Lalao hevitra momba ny dia lavitra ataon'ny fiara
Milalao ao an-trano
Amin'ity manaraka ity dia hasehonay aminao hevitra vitsivitsy hafa, amin'ny filaharana, ho an'ny hetsika mahafinaritra miaraka amin'ny zanakao, izay, miaraka amina drafitra kely, dia azo antoka fa ampidirina ao amin'ny fahatsiarovan'ny zanakao:
Lalao ho an'ny hetsika miaraka amin'ny lamba famaohana
Afo miaraka amin'ny mofo amin'ny tehina
Manidina miaraka amin'ny ankizy
Fanandramana miaraka amin'ny ankizy
Zaridaina mananika sy zaridaina tady avo
Ny fanaovana asa tanana dia tsy vitan'ny ankizy ihany fa mahafinaritra fa ho an'ny ray aman-dreny koa. Fa mila hevitra mitombina. Ny asa-tanana arakaraka ny vanim-potoana dia manome antoka ihany koa fa ny tranonao manokana dia voaravaka kanto foana amin'ny zavatra vita an-trano. Ny tsindry eo amin'ny rohy iray dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny hevitra momba ny asa-tanana:
Asa-tanana misy akora natiora
Amporisiho ny famoronana
Manjaitra miaraka amin'ny ankizy
Mirongatra ny andro fahavaratra
Milalao fihoarana fingotra | Milalaova fotoana malalaka
Fetin'ny lohahevitra fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy anaty rano
Andriambavy fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy
Fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy - bowling miaraka amin'ny ankizy
Hevitra kilalao nahaterahan'ny ankizy omby jamba
Tantara angano momba ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy
Pejy fandokoana tsingerintaona nahaterahan'ny ankizy - mankalazà tsingerintaona nahaterahana
Superhero fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny ankizy